Ganacsade ka war-helay in loo gacangelin rabo Mareykanka oo xabsi ku yaal Spain isku dhex dilay – Calanka.com
Aasaasihii baarnaamijka ka hortagga fayrasyada kombiyuutarada “McAfee Antivirus” John McAfee ayaa meydkiisa laga helay xabsi ku yaalla magaalada Barcelona saacado kadib markii maxkamad ku taal Spain ay aqbashay inay dib ugu celiso Mareykanka si loogu qaado dacwad ku aaddan canshuur lunsasho.
Waaxda cadaallada ee maamulka Catalonia ayaa sheegtay in dhakhaatiirta gargaarka degdega ah ay isku dayeen inay badbaadiyaan McAfee, balse aysan u suurogelin.
Waxay sheegtay inay jiraan calaamado muujinaya inuu isaga gacantiisa isku dilay.
Shirkadda McAfee waxay soo saartay barnaamijkii ugu horreeyay ee ganacsi ee lagula dagaallamo fayraska kombiyuutarada.
McAfee VirusScan wuxuu helay balaayiin dollar, ugu dambayntiina waxaa looga iibiyey shirkadda weyn ee teknoolojiyadda Intel in ka badan 7.6 bilyan oo dollar.
Bishii Oktoobar ee 2020 John McAfee ayaa lagu xiray Spain isagoo markaas doonayay inuu diyaarad u raaco Turkiga, waxaana lagu eedeeyay inuu ku guuldareystay inuu soo xareeyo canshuur celinta muddo afar sannadood ah, inkastoo uu maaliyiin lacag ah ka sameeyay barnaamijyo kala duwan.
Waaxda cadaallada Mareykanka ayaa ku andacootay in McAfee uu ka baxsaday mas’uuliyiinta canshuuraha iyadoo dakhligiisa lagu shubo akoonnada bangiyada iyo akoonnada lacagaha loo yaqaan ‘cryptocurrency’ oo adeegsanaya magacyada dad kale oo aan la aqoon.
Waxaa sidoo kale lagu eedeeyay inuu hanti maguurta ah oo uu lahaa oo ay ku jiraan doonyo iyo hantida kale uu qariyay, isagoo isticmaalaya magacyada dad kale.
Maxkamadda qaranka ee Spain ayaa subaxnimadii Arbacada dowladda dalkaas u oggolaatay inay Mareykanka u gacan geliso McAfee si uu u wajaho eedeymahaha loo haysto.
Sanadihii la soo dhaafay, McAfee wuxuu si isdaba joog ah u sheeganayay inay jirto qorshe la doonayo in lagu xiro. Si kastaba ha ahaatee maxkamada ayaa sheegtay in “aysan jirin cadeyn muujineysa” in loo maxkamadeynayo sababo siyaasadeed ama fikir, sida uu weriyay wargeyska El Pais.
Ganacsadaha, oo ku dhashay magaalada Gloucestershire, ee dalka Ingiriiska ayaa markii ugu horreysay soo caanbaxay sannadadii 1980-meeyadii ka dib markii uu aasaasay shirkaddiisa tiknoolajiyadda McAfee VirusScan.
In kasta oo uu hormuud ka ahaa ammanka kombuyuutarka, haddana wuxuu mar qirtay in uusan weligii barnaamijkaas ku isticmaalin kombiyuutarkiisa gaarka ah – ama barnaamij kasta oo ka hortagga fayraska.
“Waxaan naftayda ku ilaaliyaa anigoo si joogto ah u bedalaya cinwaankayga IP [internet protocol], anigoon magacayga ku lifaaqayn aalad kasta oo aan isticmaalo, iyo in aanan aadin goobaha aad ka qaadan karto virus,” ayuu u sheegay weriyaha teknolojiyada ee BBC Leo Kelion sanadkii 2013.
“Tusaale ahaan, ma daawado muuqaallada anshax xumada ah ee ku jira internate-ka.”
Wuxuu sidoo kale billaabay dedaalo uu ku doonayay inuu ku noqdo musharraxa Xisbiga Libertarian ee doorashooyinka madaxtinimada ee 2016 iyo 2020 balse wuu ku guuldareystey.
Sannadkii 2019 McAfee wuxuu muujiyey sida uu u neceb yahay canshuuraha, isaga oo bartiisa Twitter-ka ku soo qoray inuusan bixin wax canshuur ah muddo siddeed sanadood ah isagoo ku tilmaamay canshuurtu inay tahay sharci darro.
Isla sanadkaas muddo kooban ayaa lagu xidhay Dominican Republic ka dib markii lagu eedeeyay inuu hub soo geliyay waddankaas.